Infographic: ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Marketer တိုင်းသိသင့်သောလူမှုမီဒီယာ ၂၁ ခု Martech Zone
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာများ၏လွှမ်းမိုးမှုသည်နှစ်စဉ်တိုးပွားလာသည်မှာသေချာသည်။ TikTok ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းအချို့ပေါ်ပေါက်လာပြီးအချို့သည် Facebook ကဲ့သို့တူညီနေဆဲဖြစ်ပြီးစားသုံးသူအပြုအမူများပြောင်းလဲမှုကို ဦး တည်စေသည်။ သို့သော်နှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပြသထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်လူအများအသုံးပြုလာကြသောကြောင့်စျေးကွက်သမားများသည်ဤလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်အောင်မြင်မှုရရန်နည်းလမ်းသစ်များကိုတီထွင်ရန်လိုအပ်သည်။
ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကိုမျက်စိမှိတ်ကြည့်ခြင်းသည်မည်သည့်စျေးကွက်ပညာရှင်မဆိုအရေးကြီးသည်။ ငါတို့မှာ ခင်ဗျား သင့်အတွက်ဤလုပ်ငန်းကိုရိုးရှင်းအောင်ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းများပေါ်ရှိအကြောင်းအရာများကို ဦး စားပေးအမျိုးအစားများ၊ အွန်လိုင်းသုံးစွဲသူများအပြုအမူ၊ အမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းနှိုင်းယှဉ်မှုများစသည့်အချက်အလက်များနှင့်စာရင်းဇယားများပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာရှိအကြောင်းအရာအားလုံး၏ ၈၄% ကိုတင်ပြလိမ့်မည် ဗီဒီယို.
အမှတ်တံဆိပ်၏ 51% ပြီးသားဖြစ်ကြသည် ဗွီဒီယိုကိုသုံးခြင်း Instagram ပေါ်ရှိပုံများအစား
အမျိုးသား ၃၄% နှင့်အမျိုးသမီး ၃၂% သည်ရှာဖွေနေကြသည် ပညာရေးဗီဒီယိုများ.
အသုံးပြုသူ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ပိုမိုကြည့်ရှုလိုကြသည် တံတားစီး.
အသုံးပြုသူ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းကကြည့်ရတာပိုနှစ်သက်တယ် 5-6 မိနစ်ဗီဒီယိုများ ပလက်ဖောင်းပေါ်မူတည်။
သုံးစွဲသူ ၆၈% ကရှာသည် branded အကြောင်းအရာ ပျင်းစရာကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မရဘူး။
ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းသည်ရှာဖွေနေသည့်အစာများကို scroll လုပ်ကြသည် သတင်း။ အသုံးပြုသူ ၃၅% သည်ရှာဖွေနေကြသည် ဖျော်ဖြေရေး.
လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု emoji နှင့် GIF များကိုကျော်ကြားပြီးယခုအခါအွန်လိုင်း၏အဓိကဆက်သွယ်ရေးကိရိယာဖြစ်လာသည်။
ဖျော်ဖြေမှုပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာသည်နံပါတ် (၁) ကိုအသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည် TikTok.
၏ 85% TikTok အသုံးပြုသူများလည်းအသုံးပြုသည် Facebook က, ဒါမှမဟုတ်၏ 86% တွစ်တာ ပရိသတ်ကိုလည်းအပေါ်တက်ကြွစွာဖြစ်ကြသည် Instagram ကို.
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိသုံးစွဲသူများ၏ ၄၅% သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုရှာဖွေရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်.
သုံးစွဲသူ ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းကဆိုရှယ်မီဒီယာကသူတို့ကိုလုပ်စေခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တယ် ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်.
အသုံးပြုသူ ၅၅% ရှိသည် ကုန်ပစ္စည်းများတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူခဲ့သည် လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်။
တစ်ခုချင်းစီကို $ 1.00 နှင့်အတူဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်သုံးစွဲခဲ့သည် သြဇာ ပျမ်းမျှ $ 5.20 ပြန်လာ။
၏ 50% တွစ်တာ လွှမ်းမိုးသူများ၏တွစ်တာနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်သုံးစွဲသူများသည်တစ်စုံတစ်ခုကို ၀ ယ်ဖူးသည်။
သုံးစွဲသူ ၇၁ ရာခိုင်နှုန်းသည်ပြုလုပ်သည် ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်တွေ လူမှုကွန်ယက်များအပေါ်သြဇာညောင်းသောအကြံပြုချက်များအပေါ်အခြေခံသည်။
မိုက်ခရိုသြဇာ TikTok တွင်ပါဝင်မှုနှုန်းမှာ ၁၇.၉၆%၊ Instagram တွင် ၃.၈၆% နှင့် YouTube တွင် ၁.၆၃% နှင့်ထိတွေ့မှုနှုန်းသည် TikTok တွင် ၄.၉၆%၊ Instagram တွင် ၁.၂၁% နှင့် YouTube တွင် ၀.၃၇% ထက်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့သည်။
TikTok အသုံးပြုသူ ၃၇% သည်aအိမ်ထောင်စုဝင်ငွေ နှစ်စဉ် $ 100k + ၏။
ဆယ်ကျော်သက် ၇၀% သည်ယုံကြည်ကြသည် youtube က သူတို့ဟာတခြားနာမည်ကြီးတွေထက်ပိုပြီးလိုက်နေကြတယ်။
6 ထဲက 10 YouTube သုံးစွဲသူများ မည်သည့် TV host သို့မဟုတ် actor ထက်မဆို vlogger ၏အကြံဥာဏ်ကိုလိုက်နာရန်အလားအလာပိုများသည်။
ထုတ်ကုန်ကိုစိတ်ဝင်စားလူများ ၈၀% ဝယ်ခြင်း YouTube ပေါ်မှာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကြည့်ပြီးနောက်။
2020 ခုနှစ်တွင်ထိတွေ့မှုနှုန်းအပေါ် Instagram ကို 6.4% တိုးပွားလာသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် Instagram feed ပေါ်ရှိပို့စ်အရေအတွက်သည်ကျဆင်းလာသည်။ အမှတ်တံဆိပ်များစွာသည်ပုံပြင်များပိုတင်ရန်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ခင်ဗျား AI-powered ဆိုရှယ်မီဒီယာထောက်လှမ်းရေးပလက်ဖောင်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သည့်ပုံရိပ်အသိအမှတ်ပြုနိုင်စွမ်းရှိသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်စားသုံးသူများ၏ထင်မြင်ချက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၊ လုပ်ဆောင်နိုင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရှာဖွေရန်၊
Tags: 2021CiscoFacebook ကinstagramအကြီးစားသြဇာ.ရာဝတီမိုက်ခရိုသြဇာမိုက်ခရိုလူမှုမီဒီယာအချက်အလက်များလူမှုမီဒီယာ infographicလူမှုမီဒီယာစာရင်းဇယားလူမှုမီဒီယာ statsTikTokတွစ်တာဗီဒီယိုဘလော့ဂ်Vloggingငါတို့ဟာသူငယ်ချင်းတွေပါသင်စကင်ဖတ်youtube ကYouTuber
အယ်လီနာတက်စီလ်ကိုသည်အကြောင်းအရာမန်နေဂျာဖြစ်သည် ခင်ဗျား။ သူမသည်ကြော်ငြာအေဂျင်စီ၊ အိုင်တီကုမ္ပဏီများနှင့်မီဒီယာတို့တွင်လုပ်ကိုင်ခြင်းအပါအဝင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်ငါးနှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည်။
သင်၏ Youtube ဗွီဒီယိုနှင့်ချန်နယ်အကောင်းဆုံးကိုမည်သို့မြှင့်တင်မည်နည်း